Ahoana indray ny aty mandra-piandry ny ampitso sy mbola misy ve ny FFKM? | Hevitra MPANOHARIANA
Ahoana indray ny aty mandra-piandry ny ampitso sy mbola misy ve ny FFKM?
2009-02-01 @ 22:00 in Andavanandro
Efa miomana avokoa ny rehetra mandra-pahatongan'ny rahampitso. Samy manana ny fiomanany. Raha nody aho ny zoma alina teo dia maromaro ihany ny toera-mpivarotana somary ngezangeza ao afovoan-tanàna tahaka an'i Behoririka sy Antanimena iny no manao varavarana maro sosona, na ny marina kokoa mamono tanteraka ny varavarany. Ahoana moa izany?
Efa nahita ny hakingan'ny mpitarika ny fandrobana avokoa izay somary naharaka fa toy ny tsinontsinona na dia ireny varavarana vy, na misokatra amin'ny tolana ankavia sy ankavanana izany na ireny vita vahiny akatona avy any ambony hidina mankany ambany ireny. Efa katrokatroka tokoa angaha moa no atao ka tsy miraharaha sao misy mandre. Ankehitriny efa miomana ny tsy hivarotra mandritra ny fotoana maharitra ny ankamaroan'izy ireny mahita ny toe-draharaha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. "Souder"-na fefy vy mihitsy ireo varavarana ka rehefa milamina mihitsy ny tanàna (oviana moa izany? rehefa mifampihazohazo tsy mifanantona ny roa tonta tokony hamita azy haingana izay mahavita, nefa indrisy fa tsy maintsy hisy aina afoy ve amin'izany?) vao esorina ireny fefy vy ireny.
Etsy ankilan'izany dia maromaro ihany ireo olona lazaina hoe sahirana no mivorivory na mipetrapetraka na matoritory ampitan'ireny toeram-pivarotana mbola tsy vaky tamin'ny herinandro ireny... Manantena an-dry zalahy "mpamoha trano" nefa tsy haka na inona na inona akory fa mandoro izay fivarotana avy norobain'ireo madinika ireo fotsiny avy eo, ireny no toa andrasany toy ny Mesia... indrisy... tena potika tanteraka ny toe-tsain'ny maro amin'izy ireny. Tena tafiditra lalina tamin'ny maro amin'izy ireo, araka ny tombana nataoko, ny zo hangalatra sy hamaky trano fivarotana satria noana sy ratsy na tsy misy trano ipetrahana. Ohatra iray ny tabataba miaraka amin'ny teny ratsy sy ompa tsy tafala anaty resaka, teo akaikin'ny toeram-piasako nataona lehilahy iray nanao hoe: "Ordinateur" ve no nangalarina dia tadiavin-dry zalahy hogadraina? Nefa "ordinateur" tsy misy dikany iny! Ankona avokoa ireo hafa niady hevitra taminy... matetika moa ny avo vava sy mampiseho hatezerana hatrany no manana ny rariny rehefa amin'ny fotoana tahaka ireny.
Noho ny fandranitana sy ny fandragitana iainana isan'andro avy amin'ny fampielezam-peo ve fa efa mora taitran'ny vava tsy ambina ny olona amin'izao fotoana izao. Tany amin'ny fiara fitarerana iray (119 mazda hiala an'i 67ha) dia nisy lehilahy iray nipetraka eo amin'ny seza azo atsangana manakaiky ny varavarambe fandalovan'ny olona hipetraka any aoriana satria toerana akaiky hoe no itodiany (Andavamamba). Misy ary olona iray te-hitsofoka any aoriana any, niteny azy ilay mpampandroso hoe mba mitsangàna aza fady ramose hidiran'ny olona raha tsy hifindra any aoriana ianao... fa tsy nety ny anao lahy sady tsy namaly akory izy. Namerina niteny ilay mpampandroso olona fa novaliany boraingona amin'izay maninona raha eo aloha eo amin'ny seza volamena... nefa ny seza any aoriana amin'io mbola malalaka be. Mba tsy mety kosa izany, hoy ilay mpampandroso; tonga dia avo vava sy nanompaompa amin'izay ranamana nitsangana niala ny fiara ary nahateny hoe "dorako eo io fiara io!". Taitra ny saofera teo akaiky teo ka nanao hoe: "avereno hoe ny vavanao?", naveriny mafimafy kokoa hoe "dorako eo io fiara io!". Tsitapitapitr'izay fa feno olona nanodidina an-dranamana (tsy maintsy hoe ny mpanera no maro amin'ireo) ka niteny ny iray nanao hoe: "Ingahy izany no atao sorona!" Nahita ny zaa-niseho ranamana fa nitsorika nitsoaka tany anaty olona haingana...
Mahavariana ihany koa tamin'ny zoma ilay nodiako efa notantaraiko tery ambony iny ohatra fa lasa misy manao azy ho matanjaka izany ny sasany. Nitondra elo moa izaho nody tamin'io fotoana io satria fahavaratra rahateo ny andro. Indreo misy tokony ho enin-dahy eo ho eo manery ny lalana (elakela-trano) mitabataba toy ny azy ireo irery ny lalana amin'io fotoana io. Bokobokony mihitsy ny roa amin'izy ireo. Hifanena amin-dry zalahy aho amin'io ary sendra nentiko toy ny filanjana basy an-tsoroka iny indrindra ny elobeko. Somary maizina ihany moa ny andro fa hita ho tsy handefitra hanome lalana ry zalahy fa toa manery ny mifanena aminy hitampify manara-drindrina. Tsy nampidiriko tao an-tsaiko mihitsy ny hoe "mpanendaka" ry zalahy ireto fa sady tsy nihemotra aho no tsy nanao amboletra nefa nisisika teo afovoan-dry zalahy rehefa nifandona tamin-dry zalahy bokony roa teo aloha... tena hitako nisy niherika mihitsy ry zalahy nanaraka avy eo no tsy nahateny afa-tsy hoe "Oay le...!" Ny ahy ny lalako no notohizako sady tsy niherika akory aho, efa mpody alina rahateo aho. Indraindray ilaina ihany ilay fahasahiana kely fa mety ho azavatra hafa kokoa no nahazo raha nihemotra teo, ka heveriny fa "voatsindry" ianao.
Resaka fahasahiana ihany, hitako tena sahy mihitsy ry zalahy "kômandô" nandroaka ny "sono" sy ny seza sasantsasany teny amin'ny 13 mey tamin'ny Asabotsy teo iny. Tsipalotro tamin'ny fahitalavitra mihitsy ny fitsoahan'ny olona efa tonga teo rehefa tonga ry zalahy ka anisany ny "securité civile" maro efa teny an-toerana. Tena tratran'ny tampoka tokoa angaha ny olona fa noporofoin'ny Commando tamin'io fotoana io fa azony noravana tanteraka ny fivoriana teny raha tiany izany. Manao ramatahora fotsiny ireny, hoy ny mpanao gazety nanentana sy avo vava, satria "tsy hitifitra mihitsy" (hay fantany izany?) ka toy ny mandrisika ny olona hivory aza 'tena marina tokoa aloah izay fomba fihevitra izay eo amin'ny Malagasy olon'ny fo). Hitako tena "malemy" kosa ireo tena avy amin'ny "Emmo nat" ka nanaiky hiverin-dalana noho ny rodorodon-dry zalahy "mbola vitsy" tamin'ny nahatongavany tokony ho tamin'ny folo ora teo ho eo.
Fahadisoana lehibe kosa araka ny fijeriko manokana ny antso nataon'ny minisitry ny fampianarana milaza fa mianatra avokoa ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana rahampitso alatsinainy, afa-tsy hoe efa misy miaramila mahambina azy tsara angaha, nefa mbola tsy hitombina mihitsy ny sain'ny mpianatra sy ny mpampianatra raha tamy manatona azy amin'ny kiririoka ny "mpandrava". Mety ihany koa ho teti-panorona hamiliana ny mety ho "fanafihana" ny minisitera rahampitso... nefa hay moa mbola tsy tafatsangana ny minisitera tetezamita fa mety mbola ny hanonona izany no hataony rahampitso fa andro manaraka ny "fanafihana". Efa nanome baiko moa ny "mpitondra tetezamita" fa mikatona avokoa ny minisitera rehetra rahampitso alatsinainy, ka omeny taratasy na didy fampisamborana izay mpiasa mbola mitonatonana any amin'ny minisitera any (aza mikaroka fa tsy ho hitanao ao amin'ny kabarin'i Andry Rajoelina napetrak'i Jeannot Ramambazafy ao amin'i Iarivo-town izany fa henonay tsara kosa). Tena nanaitra ahy mihitsy io teny io satria ny tao an-tsaiko voalohany dia hoe: "mampigadra hay ny miasa ry zalahy!"... angamba teny nibolisatra iny ka izay no tsy nampidiran'ny mpanao gazety azy.
Mandeha antsisitsisiny eny ihany moa ny resaka izay mety ho fanaovana ramatahora hatrany. Any Toamasina, dia notetezin'ny miaramila avokoa ny trano hazo manodidina ny seranan-tsambo nanoroany hevitra ireo olona ireo hitady fialofana hafa satria tsy haharo amin'ny bala mihitsy ny rindrina hazo, trano manana rindrina vato na beton izany no hisitrihana. Malazalaza manko fa mety hisy ny fanafihana ny seranana rahampitso ka efa nahazo baiko ny mpitandro ny filaminana rehetra fa tsy misy sangy intsony ity, tsy maintsy arovana amin'ny fomba rehetra ny seranana na iza ho avy eo na iza.
Farany nefa dia ao anaty lohateny mazava tsara, nisy fotoam-bavaka ho an'ny firenena notontosain'ny FFKM tao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana androany alahady 1 febroary 2009 nanomboka tamin'ny 3 ora tolakandro. Feno tokoa ny Fiangonana saingy voamarika mazava tsara ny tsy fisian'ny mpitondra fivavahana katolika tery amin'ny polipitra. Marina fa nanokana Eveka tany Toamasina ny Katolika androany nefa mahasanganehana ihany ny tsy nahitana na dia iray aza avy amin'ny katolika amin'ny raharaha toy itony. Manomboka miala amin'ny fampiraisan'ny FFKM ve ny EKAR izay andry iray lehibe tokoa amin'ity fiombonana ity? Mbola azo lazaina hoe FFKM ve ny FFKM raha tsy eo intsony ny EKAR... Naninona raha natao fotsiny hoe FFPM raha tsy teo ny Katolika? sa lasa voailika ho azy ve ny Anglikana? Raha mitohy izao fahabangan'ny EKAR izao ao amin'ny FFKM dia tsy ho ela intsony ny hitovian'endriky ny FFKM amin'ny COE manerantany (Fiombonam-ben'ny fiangonana rehetra manerantany ankoatra ny ECAR sy ny Orthodox sasantsasany raha tsy diso aho... ka mandrafitra ny atao hoe protestanta amin'ny ankapobeny izay misy ny Pentekotista sy ny Adantista ihany koa). Saiky nanatrika io fotoana io moa ny ankamaroan'ny mpitondra ara-dalàna amin'izao fotoana izao fa tsy hita na tsy nasehon'ny manao gazety nojerena kosa ny avy amin'ny "tetezamita"... na izaho mihitsy no tsy mahalala an-dry zalahy.
jentilisa, 01 febroary 2009
Nandeha nivavaka toy ny mahazatra aho omaly ary dia nanaovana vavaka manokana i Madagasikara. Faly ery ny foko. Misaotra anao amin'ireo vaovao kely madinika toy itony mba ahafantarana hoe aiza ho aiza ny toe-tsaina @ izao fotoana izao.
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 05:38, 2009-02-02 [Valio]
AIZA NY VAOVAO ANDROANY 02 FEBROARY E !
Nampidirin'i liana @ 13:46, 2009-02-02 [Valio]
normalement raha mampita vaovao ianao ,de aza aseho eto fa mpomba andravalo ianao,fa manjary tsy mety,na dia izany de mahafinaritra ny blog nao fa mampiseho vaovao sy sary
Nampidirin'i lanto @ 20:01, 2009-02-02 [Valio]
Ny tenako moa de sady COE no tsy FFKM.... Fa T@'iny alin'ny 26/01/09 iny de teo ambony tapis no nitolona ambavaka mafy ho an'ity firenentsika ity... Ary voalohany teo @'ny fiainako no nahatsiarovako tena fa nitalaho mafy andranomaso mihitsy, t@'Andriamanitra ho an'ny fireneko aho... Nitalaho famindrampo sy famelan-keloka, ary famonjena ho an'ireo mpitondra isan'ambaratongany, ho an'izy mirahalahy mianaka(Ravalomanana sy Andry Rajoelina), ho an'ny malagasy rehetra ihany koa.... Inoako ihany koa fa tsy vitsy ny malagasy no nanao toy izay nataoko izay.... Inoako ihany koa fa araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, ka hiaino sy hamaly vavaka izy Deraina mandrakizay Jehovah Andriamanitra Mahery!
Nampidirin'i tsiafoi1 @ 09:20, 2009-02-03 [Valio]
Midera manokana sy mankahery mandrakariva anareo izay mivavaka ho an'ny firenenan aho ary manentana ny rehetra hanao izany. Tsapako fa nisaokatra ny foko ary afaka ny ahiahiko izay zary lasa nitaiza aho tato ho ato noho ny raharaham-pirenena izay misy ankehitriny. ilaina ny vavaka ho an'ny Tanindrazana eny na dia tsy ao anatin'ny sarotra toa izao aza. Tsaroako foana ny fihirana FFPM milaza hoe aza mba manadino ny tanindrazanao .... sy ireo mpitondra anao. Ny hiram-pirenentsika koa dia tena maneho fitiavan-tanidrazana ary tsy azo lavina fa noho ny fitondrana ankehitriny no namerina indray izany maha mankadiry ny tanidnrazana sy ny sainam-pirenenan izany ka mba hisian'ny fiandrianam-pirenena ao anatin'ny filaminana. Mivavah mandrakariva ho an'ny tanindrazana ny isan-tokantrano, ny isam-pianakaviana ary ny tsirairay n'aiza n'(aiza toerna misy azy ireo mba ho fanafahana an'i Madagasikara. Matoky isika fa noho ireo maritiora betsaka nandatsaka ny rany teto teto dia tsy avelan'Andriamanitra ho rendrika sy ho eo am-pelatànan'ireo mpanakorontana ny firenentsika
Nampidirin'i Tsimiova @ 08:03, 2009-02-11 [Valio]